» आजदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कति पाईन्छ ब्याजदर ?
आजदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र बिक्री खुला, कति पाईन्छ ब्याजदर ?
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०७:११
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आजेखि ८ दशमलव ५ प्रतिशत आरबीबीएल डिबेन्चर,२०८३ नामको ऋणपत्र बिक्री खुला गरेको छ। बैंकले ६ वर्ष अवधि भएको वार्षिक ८ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याजदर भएको कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैंया (२५ लाख कित्ता) मूल्य बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।
बैंकको ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी गरिनेछ । प्रतिकित्ता १ हजार दरका कुल २५ लाख कित्ता ऋणपत्रमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात १५ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट संगठित संस्थाहरुलाई बिक्री गरिने भएको छ।
ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ‘एनआईबिएल एस क्यापिटल ’ र निष्काशनकर्ता कम्पनी ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ’को आपसी सहमतिमा बिक्री वितरण गरिने छ । साथै, सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको ४० प्रतिशत अर्थात १० लाख कित्ता सर्वसाधारण नेपालीकालागि सार्वजनिक निष्काशनबाट ऋणपत्र बिक्री गरिनेछ ।
बैंकले छिटोमा जेठ २८ गते र ढिलोमा असार ८ गतेसम्म बिक्रीमा रहने यस ऋणपत्र खरिदका लागि न्युनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २ लाख ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरुबिच भर्चुअल बैठक सम्पन्न
सनराइज क्यापिटलको ११ औं बार्षिक साधारण सभा भोलि, यस्ता छन् एजेण्डा
साहज उर्जा र तेह्रथुम पावरको आइपीओ नेप्सेमा सूचिकृत, कतिमा होला पहिलो कारोबार ?
आजसम्म नेप्सेमा कायम शेयरधनीले मात्र सिभिल लघुवित्तको लाभांश पाउने
बीमा समितिको संचालक समितिले पूर्णता नपाउँदा लघुबीमा लाईसेन्स प्रकृया रोकियो
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्धारा ११ शाखा कार्यालय मार्फत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
आइपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेको सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको खुद नाफामा बृद्धि, अन्य सूचक कस्तो ?
धितोपत्र बोर्डमा रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुिक्तको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, को–को छन् चर्चामा ?
१८% लाभांश पारित गर्न पावर ट्रान्सशिनले बोलायो १३ औं साधारण सभा
मिर्मिरे लघुवित्तको खुद नाफामा उल्लेख्य प्रदर्शन, इपिएस कति ?
सन नेपाल लाइफको मृत्यु बीमा दाबी भुक्तानी
ज्योति विकास बैंकको १ लाख ८१ कित्ता संस्थापक शेयर लिलामीमा